လင် နဲ့မယား မှာ အပြန်အလှန်တင်ရမဲ့ကျေးဇူး တွေရှိကြပါတယ်..!(အရမ်းကို ကောင်းတဲ့ ပို့စ်တစ်ခုပါ) - Myanmar Express
လင် နဲ့မယား မှာ အပြန်အလှန်တင်ရမဲ့ကျေးဇူး တွေရှိကြပါတယ်..!(အရမ်းကို ကောင်းတဲ့ ပို့စ်တစ်ခုပါ)
April 16, 2018 By Myanmar Express in ဗဟုသုတ, အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ, အမျိုးသားဆိုင်ရာ, အတွေးအမြင် No Comments Tags: အချစ်ရေး, အိမ်ထောင်ရေး
အိမ်ထောင်ကျ ပြီးမှ အိမ်ရှင်မ အမျိုးသမီး ဟာ အပျို ဘ၀ကထက်ပိုလှနေတယ်၊ ပိုတင့်တယ်နေတယ်ဆိုရင် အဲဒီ အမျိုးသမီး ဟာ ခင်ပွန်းကောင်း ကို ပိုင်ဆိုင်ထားရလို့ လို့ ဆိုကြတယ်။
အိမ်ထောင်ကျ ပြီးမှ ခင်ပွန်း ဖြစ်သူ အမျိုးသား ဟာ လူပျို ဘ၀ တုန်းကထက်ပိုပြီး ခန့်ညား
တင့်တယ်နေတယ်ဆိုရင် သူဟာ ဇနီးကောင်း ကို ရရှိထားလို့လို့ ဆိုကြပါတယ်။
အပျို၊ လူပျို ဘ၀မှာထက်ပိုပြီး တင့်တယ်နေတဲ့ ဇနီးမောင်နှံ တွေကတော့ ရှေးရေစက်ကြောင့်ဆုံရတဲ့ စုံတွဲ၊ ကုသိုလ်အတူတူပြုဖို့ နတ်ဖက်တဲ့အတွဲလို့လည်း ဆိုကြပြန်တယ်။
အဲဒီအဆိုတွေကို ကျွန်မ ကတော့ နားလည်လက်ခံမိပါတယ်။အများစုမှာတော့လူပျို၊ အပျို ဘ၀တုန်းက မိဘရဲ့အရိပ်အောက်မှာ နေရစဉ်တုန်းက လောကဓံကို ကြုံရပေမဲ့မိဘရဲ့အမိုးအကာအောက်မှာ ရှိနေတဲ့အတွက် မပြင်းထန်လှပါဘူး။ ကိုယ့် အိမ်ထောင် နဲ့ ကိုယ့် မိသားစု နဲ့ဖြစ်လာချိန်မှာ ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုး လောကဓံနှစ်မျိုးစလုံးကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ကြုံပြီး ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းကြရပါပြီ။
အဲဒီလို ကာလမှာ ကို်ယ်တွဲဖက်ခွင့်ရထားတဲ့ အိမ်ထောင်ဘက် ရဲ့အရည်အသွေးဟာ
လည်း ပေါ်လွင်ထင်ရှားလာတတ်ပါတယ်။ကိုယ်နိမ့်ပါးချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုထားပြီး အငယ်နောက် လိုက်သွားတဲ့သူတွေ၊ ကိုယ့်ရဲ့ မရှိမဲ့ရှိမဲ့ပိုက်ဆံ လေးကို ယူပြီး ကိုယ့်ကိုယ်တော့ ထားပစ်ခဲ့ပြီး ထွက်ပြေးသွားတဲ့ သူတွေ၊ စိတ်ဆင်းရဲပြီး စိတ်ဓါတ်ကျနေတဲ့ ကိုယ့်ကို မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ပစ်ထားတဲ့သူတွေကို ဆင်းရဲချိန်၊ နိမ့်ပါးချိန်၊ ဒုက္ခရောက်ချိန်မှာ တွေ့ရတော့တာပါပဲ။
အဲဒီလို အ်ိမ်ထောင်ဘက် မျိုးနဲ့ ကြုံရတဲ့အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တွေဟာ အိမ်ထောင်ကျ ပြီး နောက်မှာ ခြုံးခြုံးကျကြရတဲ့ရုပ်သွင်နဲ့သွင်ပြင် ဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ မရွှင်မလန်းတဲ့ မျက်နှာနဲ့ညှိုးငယ်တဲ့ အသွင်က သူတို့ရရှိထားတဲ့အိမ်ထောင်ဘက် တွေရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို ပြသနေကြပါတယ်။
နောက်တစ်မျိုးကတော့ သူဘယ်လောက်ကောင်းသလဲ ဆိုတာကို ကိုယ်တကယ်ဒုက္ခရောက်ချိန်မှာ ပိုပြီး သိလာရတဲ့သူမျိုးပါ။ ကိုယ်အဆင်မပြေလို့ ဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာ နားလည်စွာနဲ့ ဘေးကနေရှိပြီး ရင်ဆိုင်ပေးတတ်သလို၊မိသားစုအတွက် လိုအပ်ရင် ရှေ့က ထွက်ပြီး တံတိုင်းကြီးလို ကာကွယ်ပေးတယ်၊ အသေးစား စိတ်ဖိစီးမှုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အကြီးစားစိတ်ဖိစီးမှုတွေကုိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်း အားပေးနှစ်သိမ့်ရင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့အတူတူ ဖြေရှင်းရင်ဆိုင်ပေးတယ်။
အဲဒီလို အိမ်ထောင်ဘက် ကောင်း ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူတွေကတော့ မြင်ရတာနဲ့တင် သိသာစေတယ်။ ရွှင်လန်းတယ်၊ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုရှိနေတဲ့ အပြုံးတွေနဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့သက်ဝင်နေတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု ရှိနေတဲ့အတွက် လုံခြုံမှုတစ်ခုကို ရရှိထားတဲ့သူတစ်ဦးရဲ့ အသွင်မျိုးနဲ့တွေ့မြင်ရပါတယ်။
အဲဒီလို အိမ်ထောင်ဘက် ကောင်းရရှိထားတဲ့ သူတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်ထောင်ဘက် ဆိုးနဲ့ရေစက်ဆုံနေရတဲက သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံးကတော့ ဇနီးမောင်နှံ တွေဖြစ်ကြပြီ ဆိုကတည်းက အတိတ်ဘ၀တုန်းက ကုသိုလ်၊ အကုသုိုလ် အတူတူ ပြုဖူးခဲ့တဲ့သူတွေပါ.
ဒါကြောင့်ကိုယ်ရဲ့အိမ်ထောင်ဘက် တွေအပေါ်မှာ တန်ဖိုးထားသင့်တယ်။ သူ့နဲ့ကိုယ်နဲ့ ရေစက်ရှိလို့သာ ဆုံခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချို့ကတော့ ရေစက်တွေကလည်း တိုတောင်းတက်ပါသေးတယ်။
ဘ၀ရေးမှာပဲ ဖြစ်စြဖ် အိမ်ထောင်ရေးမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ် မတူတဲ့သူတွေကလည်း ကြာကြာအတူပေါင်းသင်းနေထိုင်လို့မရပါဘူး။ ဆိုပါတော့ အိမ်ထောင်ရှင်မ က ကောင်းပါလျက်နဲ့ ဇနီးသည် အပေါ် ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ ခင်ပွန်း မျိုး ရှိနေတယ်ဆိုရင် သူနဲ့ကိုယ်က အကျင့်သီလ မှာမတူတော့ပါဘူး။မတူအတွဲတွေမှာ တစ်ယောက်က ကောင်းပြီး တစ်ယောက်က မကောင်းတဲ့အတွက် ကုသိုလ်၊အကုသုိုလ်တွေကလည်း မတူနိုင်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့် မကောင်းတဲ့သူက ကောင်းတဲ့သူနားမှာ မနေနိုင်လို့ မကောင်းတဲ့သူ အချင်းချင်းသွားပေါင်းကြတာပါ။
ဒီသဘောတရားကို နားလည်လက်ခံမယ်ဆိုရင် ကို်ယ့်နားမှာ အကုသိုလ် မကင်းတဲ့သူတွေ ကိုယ့်နားမှာ မနေနိုင်ကြတာ ကိုယ့်အတွက်ကောင်းတယ်လို့လည်း မှတ်ယူလို့ရပါသေးတယ်။
တကယ်တော့ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ယောက်၊တစ်ယောက်က ကုသိုလ်ပဲပြုပြု၊အကုသိုလ်ပဲလုပ်လုပ်၊ ကျန်တဲ့ တစ်ယောက်က စိတ်တူ(စိတ်ပါ)မှ ရနိုင်တယ်။ စိတ်မတူရင် မရဘူး။ ပြုလုပ်သူသာလျှင် ရတယ်လို့ ဘာသာရေးအရ မှတ်သားခဲ့ဖူးတယ်။
ပြီးတော့ မှတ်သားမိစေတာလည်း ရှိသေးတယ်.။
မောင်ပုဏ္ဏတောထဲမှာ လယ်ယာတွေကို တစ်ယောက်တည်း၊ဆင်းရဲပင်ပန်းစွာ
လုပ်ကိုင်နေရတယ်။တစ်ရက်တော့ နံနက် ၁၁-နာရီလောက်ထိ ထမင်းမစားရသေးဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အိမ်က ဇနီး က ထမင်းလာမပို့သေးလို့ဖြစ်တယ်။ လူ့သဘာဝက“ဆာနေတဲ့အချိန် မစားရရင် အလွန်ဒေါသဖြစ်တတ်တယ်။မောင်ပုဏ္ဏမှာလည်း နေကပူ၊အလုပ်ကပင်ပန်း၊ဗိုက်ကဆာ ထမင်းက ရောက်မလာသေး၊ ဘယ်လောက်စိတ်တိုစရာကောင်းသလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေတော့။ ဟော ..နေပူကြဲကြဲချွေးရွှဲရွှဲနဲ့ ထမင်းထုပ်ခေါင်းပေါ်ရွက်ပြီး၊ခြေလှမ်းသွက်သွက်နဲ့ လာနေတဲ့ ဇနီးသည် မြင်ရတော့ သူ့ဇနီးအပေါ် ထားတဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့ သူ့ဒေါသက အရှိန်တော့ လျော့ကျသွားတယ်။
သူ့ကို တွေ့တွေ့ချင်း ဇနီးဖြစ်သူက “မောင်ရေအချိန်နောက်ကျသွားတာ ခွင့်လွှတ်နော်၊ မောင့်အတွက် လာပို့တဲ့ထမင်းကို လမ်းမှာရှင်သာရိပုတ္တရာ မထေရ်မြတ်ကို လှူဒါန်းလိုက်တယ်၊ အဲဒါကြောင့်
နောက်တစ်ခေါက်အိမ်ပြန်ပြီး၊ချက်ရလို့မောင့်အတွက်နောက်ကျမှာစိုးလို့အမြန်ချက်ပြီးအမြန်လာခဲ့ရတယ်၊ မောင် ဆာနေမယ်ဆိုတာ သိပါတယ်။ဒီတော့ မောင်ရယ် လမ်းမှာလှူခဲ့တဲ့ ဆွမ်းကုသိုလ် ရဲ့
အဖို့ကို မောင့်အား အမျှပေးပါတယ်“ လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီတော့မောင်ပုဏ္ဏကလည်း စိတ်မဆိုးဘဲနဲ့ သူ့ဇနီး ရဲ့သဒ္ဒါစိတ်နဲ့သူ့အပေါ် ထားရှိတဲ့မေတ္တာစိတ်ကို ခံစားနားလည်ပြီး ဝမ်းသာလွန်းလို့ “ဝမ်းသာလိုက်တာ ရှင်မရယ်၊သာဓု ….သာဓု ..သာဓု”လို့ခေါ်လိုက်တယ်။
ဪ…ဒါနဲ့ရှင်မရေ ကိုယ်လည်း မနက်က အရှင်သာရိပုတ္တရာကို ရေနဲ့ဒန်ပူ လှူလိုက်သေးတယ်။ အဲဒါ ညီမ ကိုလည်းအမျှပေးပါတယ်။
“ဝမ်းသာလိုက်တာမောင်ရယ်။ သာဓု .သာဓု”ပါလို့ အသိအမှတ်ပြုလိုက်တယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင် မိသားစုအစုံနဲ့ ရိုရိုသေသေ လေးလေးစားစားနဲ့ စိတ်တူကိုယ်တူအလှူရေစက်လက်နဲ့မကွာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလှူစေချင်ပါတယ်။အဲဒီလို လှူတတ်မှလည်း ဖြစ်လေရာဘဝမှာ ပါရမီရှင် စုံတွဲတွေအဖြစ် အတူတူအကျိုးပေးကြမှာပါ။
« ငါးကန် ရှိတဲ့အိမ်တိုင်းသတိပြုသင့်တဲ့ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ် အသက်အန္တရာယ် » တိုက်ပွဲများကြောင့် ကချင် ဒေသခံ ၂၀၀၀ ခန့် တောတွင်းပိတ်မိနေ